के हो गठिया अर्थात आर्थराइटिस? कसरी हुन्छ यसको पहिचान र उपचार? « LiveMandu
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:४९
के हो गठिया अर्थात आर्थराइटिस? कसरी हुन्छ यसको पहिचान र उपचार?
Published On : २ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:४९
आर्थराइटिस अथवा गठिया जसलाई संधिशोथ पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा हड्डिका जोडहरुमा सुन्निने समस्या हुन्छ । गठियाका पीडितहरुको एउटा हड्डिको जोडमा समस्या देखिंदा एक वा एक भन्दा बढी शरीरका अन्य हड्डीका भागहरुलाई प्रभावित गर्न सक्छ । गठियाको लक्षण विशेषतः उमेरसँगै विकसित भइरहन्छ, तर यो अचानक कुनैपनि समय देखिन सक्छ । संधिशोथ अर्थात गठिया ६५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुमा देखिन्छ, जबकी यो केट्केटी, टीनएजर्स तथा युवाहरुमा पनि विकसित हुनसक्छ । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुमा गठियाको समस्या बढी हुने गर्दछ । विशेषतः ति महिलाहरुमा जसको तौल बढी छ ।
आर्थराइटिस अर्थात गठिया दुई प्रकारका हुन्छन्ः
गठिया (आर्थराइटिस) को लक्षण – Symptoms in Nepali
कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ (लक्षणहरुको आधारमा) कि हामी कुनै किसिमको आर्थराइटिसको समस्याबाट प्रभावित हो भइरहेका छौं? यसो त यसको पुष्टिका लागि चिकित्सीय परामर्शको आवश्यक्ता पर्दछ, किनकी यसमा कैंयन प्रकारका विविधता भेटिएका छन् ।
हड्डीको जोडहरुमा पीडा, जकडिएको जस्तो अथवा सुन्निनु गठियाको सबैभन्दा प्रमुख लक्षणहरुमा पर्दछ, साथै संधिशोथको समस्याका क्रममा तपाईंको प्रभावित अंग रातो हुँदै आउछ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको हिंडाईको गति पनि कम हुनसक्छ । केही मानिसहरुमा गठियाको लक्षण बिहानी समयमा बढी प्रभावी देखिन्छ ।
तपाईं घुँडा, कुहिनो, काँधे, हाथ या पूरै शरीरको कुनै पनि जोडमा गठियाको पीडाकाो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । रुमेटी गठियामा तपाईंलाई थकान महशुस हुनसक्छ अथवा प्रतिरक्षा प्रणालीको गतिविधि न्यून हुँदै गएर जोडहरु सुन्निएका कारण तपाईंलाई भोक नलाग्ने समस्या देखिनथाल्छ ।
तपाईंलाई एनीमिया पनि हुनसक्छ – जसका कारण तपाईंको शरीरमा रगतको मात्रा कम हुनपुग्छ र कहिलेकाही गठियाको बढ्दो तीव्र प्रभावका कारण रोगीलाई ज्वरो पनि आउनसक्छ ।
गम्भीर रुमेटी गठियाको यदि समय छँदै उपचार नगरिएको खण्डमा बिरामीको हड्डीका जोडहरुलाई नराम्रो तरिकाले खराब गर्नसक्ने कारण बन्न सक्छ ।
गठिया रोगमा हाथ तथा खुट्टामा गाँठो बन्न थाल्दछ तथा उपचारमा ढिलाभएको खण्डमा यो समस्याले गम्भीर रुप लिनसक्छ । जस्तै कपाल कोर्न अप्ठेरो हुने, सिढी चढ्न तथा हिंडडूल गर्न समेत गार्ह्रो हुँदैजान्छ ।
गठिया (आर्थराइटिस) को कारण
कार्टिलेज तपाईंको हड्डीका जोडहरुमा हुने एक नरम तथा लचीलो ऊतक (टिशु; tissue) हो । जतिबेला तपाईं हिंडडूल गर्नुहुन्छ र तपाईंका हड्डिका जोडहरुमा दवाब पर्छ त्यतिबेला कार्टिलेजले प्रेशर तथा शकलाई अवशोषित (absorption) गरी जोडलाई बचाउन सहयोग गर्दछ । कार्टिलेज ऊतकहरुको मात्रामा कमीका कारण कैंयन प्रकारका गठिया हुने गर्दछन् ।
सामान्य चोटहरु पनि अस्टियो आर्थराइटिसको कारण बन्ने गर्दछ । यो गठियाको सबैभन्दा सामान्य रूपमध्ये एउटा हो । हड्डीका जोडहरुमा संक्रमण (infection) या चोट कार्टिलेज ऊतकहरुको प्राकृतिक मात्रालाई कम गर्न सक्दछ । यदि परिवारका अन्य सदस्यहरुमा यो समस्या पहिलेदेखि चलीआएको छ भने यो रोग नयाँ पुस्ताहरुसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहिरहन्छ ।
गठियाको एक अर्को आम रुप हो रुमेटी आर्थराइटिस, यो एक प्रकारको अटोइम्यून डिसअर्डर हो । यसको शुरुआत त्यसबेला हुन्छ जतिबेला तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली शरीरको ऊतकहरुमा हमला गर्न सक्छ । यि हमलाका कारण सिनोवियममा प्रभाव पर्दछ । सिनोवियम तपाईंको हड्डीको जोडहरुमा हुने एक नरमखालको टिशु हो । जसले लिक्विडलाई बनाउदछ जसका कारण कार्टिलेजलाई पोषण तथा जोडलाई आवश्यक चिप्लोपन दिनेगर्दछ । रुमेटी गठिया सिनोवियममा हुने एक खालको रोग हो जसले हड्डीको जोडहरुमा हमला गरेर त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ । यो समस्या जोड भित्रको हड्डी तथा कार्टिलेजलाई नष्ट हुने कारण बन्न सक्छ ।
यसो त इम्यून सिस्टममा हुने हमलाका सही कारण यही हो भन्न सकिन्न, तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार जीन (genes), हार्मोन तथा पर्यावरणीय कारण रुमेटी गठियाको जोखिमलाई दशगुणा बढाउन सक्छ ।
गठिया (आर्थराइटिस) बाट कसरी बच्ने? – Prevention of Arthritis in Nepali
अर्थराइटस एउटा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हो, जसको उपचार समय हुँदै गर्न आवश्यक छ । संतुलित आहार तथा सरल जीवनशैलीबाट तपाईं आफूलाई यो रोगबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्छ । सन्तुलित आहाराले न केवल रोगलाई रोक्न मदत गर्छ कि कैंयन रोगहरुलाई स्वाभाविक रूपबाट ठीक गर्ने पर्याप्त क्षमता पनि हुन्छ । गठिया शरीरमा आवश्यक्ता भन्दा बढी यूरिक एसिड बढेका कारण पनि हुनसक्छ । विशेषतः गठियाको रोग जोड सुन्निएको अवस्थालाई कम गर्ने ओखतिहरुमा निर्भर हुनेगर्दछ र यो रोगको स्थाई समाधान भने छैन । किनकी यो औषधिहरुको कैंयन साइड इफेक्ट हुनसक्दछन् । यस्तोमा यो रोगबाट दूरी बनाइराख्नका लागि तथा राहत पाउनका लागि यो आवश्यक छ कि तपाईं उचित आहार तथा स्वस्थ जीवनशैलीलाई अपनाउनुहोस् । एकातर्फ जहाँ गलत आहार तथा अनेकखाले रोगहरुलाई जन्म दिनसक्छ । त्यहिं उचित आहार तथा नियमित खानपानबाट तपाईं कैयन रोगहरुबाट निदान पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको आहारमा केही उचित खाद्यपदार्थहरुलाई शामिल गरेर तथा केही अनुचित खाद्यपदार्थहरुलाई छोडेर, गठिया तथा त्यसले दिने असहनीय पीडाबाट आराम पाउन सक्नुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो रोगको उपचारमा बेपरवाह नहुनुहोस् ।
गठिया (संधिशोथ) को परीक्षण – Diagnosis of Arthritis in Nepali
परामर्शका क्रममा चिकित्सकले तपाईंको गठियाको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिले यो हेर्दछन् कि के तपाईंमा गठियासँग सम्बन्धित लक्षणहरु देखिएका छन् वा छैनन । यदि हो, भने त्यो कसरी विकसित भयो, त्यसपछि चिकित्सकले तपाईंको सामान्य सोधपुछ सहितको सामान्य परिक्षण गरी तपाईंलाई केही अन्य परिक्षणका लागि भन्नेछन् ।
चिकित्सकले गठियाको परिक्षण कसरी गर्दछन्? – How do doctors check for arthritis in Nepali
परिक्षणका क्रममा चिकित्सकले तपाईंसँग निम्न प्रश्नहरु गर्नसक्छन्ः
तपाईंलाई शरिरको कुन अङ्गमा अथवा कुन भागमा पीडा भइरहेको छ? (हड्डीको जोडमा अथवा जोडको बीचमा) तथा कुन जोड पीडाबाट ग्रस्त छ ।
तपाईंको जोडमा अथवा जोडको छेउछाउ सुन्निएको, तात्तिएको, रातोपन तथा छुँदा पीडा त छैन ? सुन्निनु भनेको गठियाको संकेत हुनसक्छ ।
चिकित्सकले तपाईंको स्वास्थ्यको अन्य स्थितिहरुकाो बारेमा सोधपूछ गर्नसक्छन्, किनकी गठिया तपाईंको शरीरको अन्य अंगहरुलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछन् ।
यसपछि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको परिक्षण गर्दै यि संकेतहरुलाई खोज्नेछन्ः
हड्डीको जोडहरु सुन्निनु भनेको इनफ्लेमेटरी आर्थराइटिसको कारण हुन सक्छ ।
पीडा तथा सीमित मूवमेन्ट, साथै झनझनाहट महशूस गर्नु (Crepitus), जुन अपक्षयी (Degenerative) गठिया जस्तो कि अस्टियो आर्थराइटिसको संकेत हुन सक्छ ।
नरम ऊतक (Tissues) लाई छुँदा असहज हुने तथा पीडा महशूस हुनु ।
मुखमा बिमिरा या अल्सर हुनु पनि गठियको संकेत हो ।
गठिया निदानका लागि परिक्षण – Tests for arthritis diagnosis in Nepali
१) गठियाका लागि प्रयोगशाला परीक्षण – Lab tests for arthritis in Nepali
कैंयन प्रकारका शारीरिक तरल पदार्थहरुको जाँच बाट गठियाको बारेमा बताउन सकिन्छ ।
विशेषतः ब्लड टेस्ट (रक्त परिक्षण), यूरिन टेस्ट (पिसाब परिक्षण) तथा हड्डीको जोडहरुको तरल पदार्थको परिक्षणहरु हुन् ।
तपाईंको हड्डीको जोडहरुबाट तरलपदार्थको एउटा नमूना लिनका लागि चिकित्सकले सबैभन्दा पहले तपाईंको हड्डीको जोडलाई सफा गर्नेछन्, फेरी त्यस भागलाई लठ्ठयाउने औषधी लगाएर इन्जेक्टसन (सुई)को मदतले तरल पदार्थ निकाल्नेछन् ।
२) गठियाका लागि इमेजिङ परिक्षण – Imaging tests for arthritis in Nepali
केही यस्तो परीक्षण छन् जसबाट तपाईंको हड्डीको जोडको भित्र रहेको समस्याहरुको पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसका कारण तपाईंमा गठियाको लक्षण देखिएको छ । जस्तो किः
गठियाका लागि एक्स-रे – X-Ray for Arthritis in Nepali
गठियाका लागि चुम्बकीय अनुनाद इमेजिङ (सीटी स्क्यान) – CT Scan for Arthritis in Nepali
आर्थराइटिसका लागि एमआरआई – MRI for Arthritis in Nepali
आर्थराइटिसका लागि अल्ट्रासाउण्ड – Ultrasound for Arthritis in Nepali
१) गठियाका लागि एक्स-रे
यसमा हड्डीलाई हेर्नका लागि रेडिएशन (विकिरण) को कैंयन स्तरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । एक्स-रेबाट कार्टिलेजलाई भएको असर, हड्डीमा भएको क्षति तथा हड्डीको प्रवाह हेर्न सकिन्छ । एक्स-रेबाट प्रारम्भिक गठियाबाट भएको क्षतीलाई हेर्न सकिदैन, तर यसको सहयोगबाट रोग कुन रफ्तारमा बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग प्रदान गर्दछ ।
२) गठियाका लागि सीटी स्क्यान
सीटी स्क्यानरले बेग्लै कुनाबाट एक्स-रे लिने गर्दछ । जसबाट आन्तरिक सन्रचनाहरुको पूरै जानकारी प्राप्त हुन्छ । सीटी स्क्यानरबाट जोडको दुवै हड्डि तथा छेउछाउमा रहने नरम ऊतकहरु स्ष्टसँग देख्न सकिन्छ ।
३) आर्थराइटिसका लागि एमआरआई
एउटा शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र सहितको रेडियो तरङहरकुो संयोजनलाई म्याग्नेटिक रेजनन्स इमेजिङ (एमआरआई; MRI) नरम हड्डी, कुरकुरे हाड तथा स्नायुबन्धन जस्तो नरम ऊतकहरु (Tissue) को स्तरीय क्रस-सेक्शनल तस्वीर खिच्दछ । एमआरआई स्क्यानबाट शरीरको आन्तरिक संरचनाहरुको स्तरीय तस्वीर प्राप्त हुन्छ, जसबाट नरम ऊतकहरुमा लागेको रोगहरुबारे सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
४) आर्थराइटिसका लागि अल्ट्रासाउण्ड
एमआरआई तथा अल्ट्रासाउण्ड दुवै एक्स-रेको तुलनामा हड्डिहरुमा आएका चिरा या घिसिएको पत्ता लगाउनमा बढी प्रभावकारी साबित हुने गर्दछ । साथै यसबाट हड्डी सुन्निएको पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसका लागि खासरुपमा हामीले रक्त परिक्षण (Blood Test) अथवा हड्डीको जोडलाई महशूस गर्नका लागि औंलाको उपयोग गर्ने गरिन्छ । अल्ट्रासाउण्डको उपयोग हड्डीको जोडबाट लेसिलो तरलपदार्थलाई निकाल्न तथा इन्जेक्शनका लागि सुई कुन ठाउँमा लगाउने भन्ने निर्णय लिन पनि गर्ने गरिन्छ ।
गठिया (आर्थराइटिस) को उपचार – Arthritis Treatment in Nepali
गठियाको उपचार कसरी गर्ने गरिन्छ?
गठियाको उपचार तपाईंमा देखिएको लक्षणहरुमा सुधार तथा हड्डिको जोडहरुले गर्ने कार्यलाई राम्रो गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ । इसको उपचार गर्नु अघि यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार कुन हुनेछ ।
औषधीहरुः गठियाको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधीहरु गठियाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ । प्रायः गठियाको उपचारमा निम्नलिखित औषधीहरुको प्रयोग हुनेगर्दछः
पीडा कम गर्ने औषधीहरु (Analgesics) – यो औषधीहरुबाट पीडा कम हुनेगर्दछ, तर सुन्निएको भागमा भने यसले कुनै असर अथवा समाधान दिंदैन । जस्तैः एसिटामिनोफेन (Acetaminophen)
नन-स्टीरयडल एन्टी-इन्फ्लमेट्री औषधी (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) (NSAIDs) – यो औषधीहरु पीडा तथा सुन्निएको दुवैलाई कम गर्नेगर्दछ, उदाहरणका लागि – आइबूप्रोफेन (Ibuprofen) । केही औषधीहरु क्रिम अथवा जेल (Gel) को रूपमा उपलब्ध छ । जसलाई हड्डीको जोडको पीडा भएको भागमा दल्ने गरिन्छ ।
कर्टिकस्टेरइड्स (Corticosteroids) – यसले सुन्निएको भागलाई कम गर्दछ तथा प्रतिरक्षा प्रणालीमा दबाव राख्दछ । यसलाई पानीको सहयोगमा मुखबाट निल्ने गरिन्छ अथवा इन्जेक्शनको सहयोगबाट पीडा भएको हड्डीको जोडमा लगाउने गरिन्छ ।
काउन्टर इर्रिटेन्ट्स (Counter-Irritants) – गठियाका कारण हुने पीडा रोक्नका लागि, यसलाई पीडा भएको जोडको त्वचामा लगाउने गरिन्छ ।
डिजीज-मडिफाइङ एन्टी-रूमेटिक औषधीहरु (Disease-modifying anti-rheumatic Drugs) (DMARDs) – यसको प्रयोग रूमेटाइड गठिया (Rheumatoid Arthiritis) लाई ठीक गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ ।
केही किसिमका गठियाको उपचार शारीरिक चिकित्साद्वारा समेत गर्नसकिन्छ । शारीरिक व्यायाम गर्नाले हिंडडूलको गतिको सीमामा सुधार हुनसक्छ, तथा यसबाट हड्डीका जोडको छेउछाउको मान्सपेशिहरु पनि बलियो हुन्छन् ।
शल्यक्रिया (सर्जरी Surgery/Operation)
यदि उपरोक्त कुनैपनि उपचारविधीबाट तपाईंको स्वास्थ्य सुधार हुन्न भने चिकित्सकले अन्तिम् विकल्पको रुपमा तपाईंलाई पीडाभएको शरीरको भागमा रहेको जोडको शल्यक्रिया (सर्जरी) गर्ने सल्लाह दिनसक्छन् । जस्तो कि –
शल्यक्रियाको सहयोगमा हड्डीको जोडलाई ठीक गर्नु – केही घटनाहरुमा, हड्डीको जोडको सतहलाई चिल्लो तथा पुनः संगठित गरिदिइन्छ । जसबाट जोडमा हुने पीडा कम हुन्छ र जोडले गर्ने काम पहिलेभन्दा राम्रो हुँदैजान्छ ।
घुँडाको जोडलाई फेर्ने शल्यक्रिया – यो प्रक्रियामा, खराब घुँडाको जोडलाई कृत्रिम जोडले प्रतिस्थापित गर्ने गरिन्छ । जैस्तो कि – कुहिनो तथा घुँडाको जोड ।
ज्वाइन्ट फ्यूजन (Joint Fusion) (दुई हड्डिहरुलाई आपसमा जोड्ने गरिन्छ) – यसको प्रयोग प्रायः स-साना हड्डीका जोडहरुमा गर्ने गरिन्छ, जस्तो कि – पाखुरा, गोलीगाडा (Ankle) औंलाको जोडहरु ।
अन्य उपचारः केही गठिया पीडितहरुले उपचारका लागि अन्य उपचार विधीहरुको समेत सहारा लिने गर्दछन् । जस्तो कि –
एक्यूपञ्चर – यो चिकित्सामा कैंयन प्रकारको शारीरिक पीडाहरुलाई कम गर्नका लागि त्वचाको विशिष्ट बिन्दुहरुमा रौं जस्ता मसिना सियोहरुले घोप्ने गरिन्छ ।
ग्लूकोसेमिन – ति बिरामीहरु जसलाई मध्यदेखि तीव्र पीडा हुनेगर्दछ, उनीहरुलाई यो औषधीको सेवनले आराम प्राप्त हुन्छ ।
योग – योग गर्नाले हड्डीका जोडको लचीलोपन तथा गतिको सीमा राम्रो हुँदै जान्छ ।
तेल मालिश – तेल मालिश (यसले रगतको बहावलाई बढाउने गर्दछ) गराउनाले कुछ समयका लागि हड्डिको जोडहरुमा हुने पीडाबाट आराम भई न्यानो प्राप्त हुन्छ ।